OEM Skid steer loader အမျိုးအစားပေးသွင်းသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ Jiwei
Skid စတီယာရင် loader အမျိုးအစား
၁၂ နှစ်ကျော်ဟိုက်ဒရောလစ်အနှောက်အယှက်များထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ HMB သည်ဖောက်သည်များကို ပိုမို၍ စိတ်ချရသော၊ အကုန်အကျခံ။ တာရှည်ခံအနိုင်ယူသောသံတူများကိုဆောက်လုပ်ခြင်း၊ သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ဖြိုဖျက်ခြင်းစသည်ဖြင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ အမျိုးအစား၊ ဒုတိယအမျိုးအစားသို့မဟုတ် skid steer loader အမျိုးအစား၊ သင် HMB တွင်သင်လိုချင်သောအရာကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
။ HMB ဟိုက်ဒရောလစ်အနိုင်အထက်မိတ်ဆက်စကား
ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဟိုက်ဒရောလစ်အဆက်ဖြုတ်တပ်ဆင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကအသိအမှတ်ပြုသည် ။YanTai JiWei Construction Machinery Equipment, Ltd ။ ပုံစံ၊ အဆုံး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များစွာကိုကမ်းလှမ်းသောကျောက်ထုဖြင့် HMB အရည်အသွေးမြင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းစီးနိုင်သည့်မြင်းစီးစက်အမျိုးအစား HMB အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်အထူးပြုသည်။ HMB 530/680/750 မြင်းစီးဘီးဖြင့်မောင်းနှင်သောဟိုက်ဒရောလစ်တူသည် ၂.၅ အတွက်သင့်လျော်သည် -9 တန်တူးဖော်။
တူးဖော်သည့်အလေး (တန်ချိန်) အတွက် ၀.၆-1 0.8-1.2 ၁-၂ ၂-၅ ၄-၆ 5-7 ၇-၉ ၉-၁၂ ၁၂-၁၇ ၁၅-၁၈ ၁၈-၂၅ ၂၀-၃၀ ၂၅-၃၀ ၂၇-၃၆ 30-40 35-45 42-50 45-52 45-58 48-60 50-60 50-70 60-90
လည်ပတ်နေသောအလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) ဘေးထွက်အမျိုးအစား 82 90 100 130 240 250 380 510 760 1320 1450 1700 2420 2500 2900 3750 3900 4030 4230 4876 5980 6150 6580
ထိပ်အမျိုးအစား 90 110 122 150 280 300 430 55 820 1380 1520 1780 2500 2600 3100 3970 4100 4180 4460 5036 6180 6300 6780
အသံတိတ်အမျိုးအစား 98 130 150 190 320 340 480 580 950 1450 1650 1850 2600 2750 3230 4150 4200 4300 4760 5380 6380 6550 6998
Backhoe အမျိုးအစား 110 130 280 300 400
Skid စတီယာရင် loader အမျိုးအစား 235 283 308 336 398
အလုပ်စီးဆင်းမှု (L / Min) 10-30 ၁၅-၃၀ ၂၀-၄၀ ၂၅-၄၅ ၃၀-၆၀ ၃၆-၆၀ 50-90 60-100 80-120 90-150 130-170 150-190 170-220 170-220 200-250 250-280 250-280 250-280 250-280 250-280 250-300 260-320 260-340
အလုပ်ဖိအား (ဘား) 80-110 90-120 90-120 90-120 100-130 110-140 120-170 130-170 150-170 150-170 160-180 165-185 180-230 180-230 200-250 250-300 250-300 250-300 280-310 280-310 280-320 280-340 380-340
သက်ရောက်မှုနှုန်း (Bpm) 500-1200 500-1000 500-1000 500-1000 500-900 500-900 400-800 400-800 400-700 400-650 400-650 400-500 300-450 300-400 250-400 250-350 230-320 230-320 230-320 210-300 210-300 180-260 150-250
ရေပိုက်အချင်း (လက်မ) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1 1 1 1 1 ၅/၄ ၅/၄ ၅/၄ ၅/၄ ၅/၄ ၅/၄ ၅/၄ 1.5-2 1.5-2
ကိရိယာအချင်း (mm) 35 40 45 53 60 68 75 85 100 125 135 140 150 155 165 175 180 185 190 195 200 205 215
ဘာတွေလဲ HMB skid steer ဟိုက်ဒရောလစ်အနိုင်အထက် features?
။ HMB ဟိုက်ဒရောလစ်အနိုင်အထက်လျှောက်လွှာ
၁။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းစကိတ်စီးပဲ့တင်စက်ကိုဟိုက်ဒရောလစ်အဆက်ထုတ်လုပ်သူများ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံရှိသည် နှင့် 12 နှစ်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကို။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူ ၁၀ ယောက်နှင့်ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ၁၀၀ ကျော်ရှိသည်။
၃။ အနောက်နိုင်ငံအော်ပရေတာများနှင့်ကိုက်ညီရန်အမြင့်ဆုံးစံချိန်မှီသီးသန့် QC အဖွဲ့ရှိသည်
4. တစ်နှစ်အာမခံ၊ လူနာနှင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းမပြုမီနှင့်ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုများ
၅။ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း၊ CAD သည်တွဲဖက်ထားသည့်ပစ္စည်းတိုင်း၏ဒီဇိုင်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်တွက်ချက်ပြီးပုံစံပြုခဲ့သည်
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည် YanTai JiWei ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်းကိရိယာကုမ္ပဏီလီမိတက်၏နိယာမအမြဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုသုတနှင့်ပဏာမခြေလှမ်းကိုအသုံးပြုပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသည့်စကရင်စီးသည့်ဘီးပါ ၀ င်သောအမျိုးအစားဟိုက်ဒရောလစ်အနိုင်အထက်ကျောက်တုံးအားဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက်သံတူစက်ရုံ၏ရှေ့တွင်လမ်းလျှောက်သည်။ ။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ အချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
နောက်တစ်ခု: ဟိုက်ဒရောလစ်မှတ်တမ်း grapple
Backhoe ဟိုက်ဒရောလစ် Breaker
ရောင်းရန် Hydraulic Breaker
Backhoe Loader အမျိုးအစား